Izithambisi ezizenzela ngokwakho, into ekufuneka uyazi | Amadoda aQinisekileyo
Izithambisi zokuzicoca, into ekufuneka uyazi
Yiba neklasi | | Zokuthambisa
Ihlobo liya ngokuncipha. Saqala ukucinga malunga "nokusebenza kwebikini". Sifuna ukubonakala sincinci, simnyama ngakumbi, mfutshane ngakumbi. Kodwa ke, Ngoku ndilufumana njani ulusu lwam ekufumaneni ithoni efanelekileyo? Kukho iindlela ezininzi. Ungaya kwiCaribbean kangangeentsuku ezimbalwa, ulungiselele umbala othathwa bubuso bakho xa usiya emkhenkceni okanye ukhetha iindlela "ezingezizo". Phakathi kwezi kukho izinto ezimbini ezibalaseleyo: imitha ye-uva kunye iimveliso zokuzicoca. Ezi zokugqibela zisetyenziswa kakhulu, ngakumbi kwixabiso lazo.
Zimbini iintlobo zeemveliso kwindawo yentengiso, ezosulayo kunye nezithambisi. Nazi ubuninzi bezimvo kunye nethiyori malunga neziphumo zayo. Kuthekani ukuba bashiya umkhondo, ukuba bayabala, ukuba abazishiyi iziphumo ezifanayo ...
Zingasetyenziswa, kodwa Kuya kufuneka uthathele ingqalelo ezinye izinto ngaphambi kokuba uye ezantsi kwishishini. Ukwenza oku, ngenxa yokusetyenziswa okukhulu, siya kugxila kwinkqubo eya kulandelwa ebusweni.
Ukufezekisa umphumo ofanayo kunye nobonakala ngathi ufana nobomi, kufuneka ucoce ulusu kakuhle. Kule nto, i-gel exfoliating kufuneka isetyenziswe kodwa ngokuchanekileyo, ulusu kufuneka lube lolugqibeleleyo. Nje ukuba siphumelele kweli nyathelo, ekungekho lula ukulifezekisa, kufuneka moisturize ulusu ngokulinganayo.
Ubuso bonke bufanele bufakwe amanzi ngendlela efanayo, ukuba asiyiphumezi (into enokwenzeka) xa siqhubeka nokufaka isicelo sokuzicoca akusayi kuba neziphumo ezifanelekileyo.
Ukuba sikwazile ukuhamba ngala manyathelo mabini adlulileyo ngempumelelo, linyathelo lokugqibela nelokugqibela, kunye nobunzima ngakumbi, thambisa cream okanye sula. Imveliso kufuneka isasazwe ngokulinganayo ebusweni bonke, inike ingqalelo ekhethekileyo kwezona ndawo zinzima, imilebe yomlomo, impumlo, amehlo, iindlebe ... Into ebucayi kakhulu kwaye enokubangela umonakalo wokwenene kubuso bethu (okanye indawo Sifuna ukudubula). Kungenxa yokuba kufuneka ugcine engqondweni ukuba ayisiyothambiso leyo, leyo iziphumo ezingafunekiyo azinakucinywa ngokulula
Ukuba unomdla wokwenziwa kwezikhumba ngoku, okanye ngexesha elithile apho ungenako ukukwenza ngokwendalo, olona khetho lulungileyo kukuba zibeke ezandleni zobuhle bakho. Baziingcali abazinikezela kuyo kwaye bakholelwa kum, awuyi kuba ngowokuqala ukuya kuhlobo oluthile lokuzisebenzisa.
Umendo opheleleyo kwinqaku: Amadoda aQinisekileyo » Ukunyamekela » Zokuthambisa » Izithambisi zokuzicoca, into ekufuneka uyazi
luhlaza okwesibhakabhaka kunye neorenji sitsho
banezithintelo…. Ukuba u-self-tan ebusweni bakho nasentanyeni kwaye ikulungele, ubopha ngaphezulu, kwaye ukuba ubopha ngaphezulu, xa i-garter ekuthethwa ngayo ikukhulula ikhulule ihempe yakho, uyabona ukuba unobuso obuntsundu kunye nomzimba omhlophe , kwaye oko kuyothusa ... 😉
Amahlaya ecaleni, ndizamile uninzi kwaye akukho namnye owendalo ngokupheleleyo, ukongeza, bangcolisa ulusu (bavale ii pores)
kunjalo nje! ukuba zithini iziphumo ezingenakuphetshwa… Ndabona ikrimu yokulwa ulusu phesheya phesheya ngexesha elithile elidlulileyo, ukubuyisa ithoni yokuqala. Khange ndiyizame kwaye andazi ukuba ndingayenza njani, kodwa isasebenza komnye umntu!
Hector, ndinamathandabuzo amabini. Inye yeyokuba izithambisi zokuzicoca zisebenza njengezithambisi kwaye enye, uthini ngeendevu? Ngaba kufuneka uchebe kwangaphambili? Ndicinga njalo kuba ukuba awukwazi ukwenza umzobo ...
Umbala oluhlaza okwesibhakabhaka kunye neorenji, inyani kukuba andazi ukuba ikhona na ikrimu enokuthi icime ifuthe lokushuka. Ndiza kuzama ukufumanisa ukuba yintoni kanye kwaye isebenza njani.
UFernando, kukho ezinye izithambisi zokuzicoca (ungaze uzisule ezidumileyo) ezikwanokuthambisa. INivea, L'Oreal kunye nezinye iimveliso ezithandwayo ngaphandle kokuqhubeka, ewe, musa ukulindela iziphumo ezilungileyo. Ngokucacileyo, ukuba unesibindi sokuzimela ngokwakho, kufuneka uchebe. Njengoko usitsho kakuhle, iinwele ziya kugubungela inxenye yolusu kwaye awuzukufezekisa iziphumo ezifanayo.
jonga, imveliso endikuxelele ngayo yile:
Inemibala emibini "yokuthambisa" ulusu, khange ndiyizame, kodwa inokuba luncedo kwintlekele kunye nomntu othile ozisusileyo! Okanye mhlawumbi kubi, andazi!
Yeyiphi ikrimu yokuzicoca onokuyicebisa? Ngaba iyasebenza ngokwenene, okanye iyayishiya loo hue yeorenji eyenziweyo?
UMiguel, njengoko benditshilo eposini, andikucebisi, ngaphandle kokuba uzibeke ezandleni zobuhle bakho. Ngoncedo lwabo unokufikelela ithoni efanelekileyo. Ukuba unomdla omkhulu kulusu, ndikucebisa ukuba usebenzise imitha yediliya, uya kuphumelela, ndikholelwe.
Ndiyaxolisa ukungavumelani ngokupheleleyo nawe. Ndisebenzise izithambisi zokuzicoca ngeminyaka emininzi (ebusika ndinombala obusabekayo ongathandekiyo ukuwabona) kwaye ukuba nje banenqanaba, njenge-biotherm homme okanye i-nivea, ungafezekisa ngaphezulu kwesiphumo esaneleyo.
Gcina ukhumbula ukuba iimveliso ezingabizi kakhulu zihlala zibangela iziphumo ezibi, ezinje ngesikhumba seorenji kunye nokushuka okungalinganiyo. Kungcono uchithe imali encinci ukufumana iziphumo ezingcono.
Ndiyavuma ngokupheleleyo ngesihloko seendevu. Kuya kufuneka uchebe ngokugqibeleleyo ukuze ukwazi ukufaka ukhilimu kwaye ubuso bucocekile, nangona kunjalo, ulandelelwano endinokulucebisa ngalo: kukucoca isepha nasemva nje kwesithambisi, vumela imizuzu embalwa ukuba ulusu luthathe kakuhle isithambisi kwaye emva koko ufake isicelo somsuki.
Ndiyathemba ukuba ndiye ndanceda !!
Izihlangu ezibiza kakhulu emhlabeni, nguLouis Vuitton
Zingaphi izihlandlo oza kulala ngazo ebomini bakho?